नेपाल आएको आइएमएफ टोलीले क-कसलाई भेट्दैछ? आर्टिकल फोरमा कस्तो आउला नेपाल रेटिङ :: BIZMANDU
नेपाल आएको आइएमएफ टोलीले क-कसलाई भेट्दैछ? आर्टिकल फोरमा कस्तो आउला नेपाल रेटिङ
प्रकाशित मिति: Jan 12, 2017 12:14 PM
काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को टोली नेपाल आएको छ। टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग भेटघाट तिब्र पारेको छ।
जेरार्ड जे. अलमेकिन्डर्सको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली आर्टिकल-IV मिसनका लागि नेपाल आएको हो। उनीहरु १३ दिनसम्म नेपालमा रहने छन्।
आइएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा हरेक बर्ष त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर उपयुक्त राय बनाउन टोली पठाउने गरेको छ। उनीहरुले आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर राय बनाएपछि 'आर्टिकल-IV' मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन्।
आर्टिकल-IV मिसनमार्फत आएको टोलीले नेपालको म्याक्रो फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आर्थिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्छ। उनीहरुले नेपालको विनिमय दर प्रणाली र विनिमय अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गर्छन्।
नेपालमा आर्थिक कृयाकलाप कस्तो भइरहेको छ? बस्तुस्थित के छ? वर्तमान अवस्था कस्ता छन्? आफूले बेलावखत दिएको प्राविधिक सुझाव तथा सहयोगको कार्यान्वयन अवस्था के छ? टोलीले अध्ययन गर्छ।
उनीहरुले आवश्यक अध्ययन गरेपछि रिपोर्ट तयार गर्छन्। रिपोर्टमाथि आइएमएफको २४ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा छलफल हुन्छ।
नेपाल आएको आइएमएफ टोलीले क-कसलाई भेट्दैछ? आर्टिकल फोरमा कस्तो आउला नेपाल रेटिङ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।